Zilofo Marwan: Mpilalao hoavin’ny kitra Malagasy
lundi, 03 août 2020 11:29
Zanaka Malagasy, mipetraka sy milalao any Frantsa i Zilofo Marwan. 18 taona, teraka tamin’ny 15 jona 2002 tao Toulon (Frantsa) ary ranjanana ny tovolahy.
Novolavolaina tao amin’ny Paris Saint Germain izy. Nitana toerana vodilaharana, natao irakiraka ary lasa elatra mpanafika. Ao amin’ny klioba Montpellier Héraut Sport Club (MHSC) sokajy latsaky ny 19 taona na U19 izy ankehitriny.
Miaky ny fahaizana sy talenta ao amin’i Zilofo Marwan ingahy Frédéric Garny, mpanazatra ny MHSC U19, ary tsy nanafina ny hafaliany manana mpilalao hoavin’ny baolina kitra.
Maro amin’ny mpitia baolina kitra Malagasy no maniry ny hahita an’i Zilofo Marwan ho isan’ireo handrafitra ny Barea an’i Madagasikara hiaro ny voninahi-pirenena. Ny mpanazatra nasionaly ihany anefa moa no tompon’ny fandidiana ny amin’izany.
Na izany aza tsy ho vaovao amin’i Zilofo Marwan raha misy ny fiantsoana azy indray satria efa isan’ireo nantsoina nandrafitra ny Barea U17 izy tamin’ny 2017, hiatrika ny CAN U17 tokony ho natao teto Madagasikara, saingy tsy raikitra moa io fifaninanana kaontinantaly io.
Tsara ny mampahatsiahy fa mpihavana akaiky i Zilofo Marwan sy Johann Paul, ity farany izay efa mpilalao sady kapiteny tao amin’ny Barea an’i Madagasikara.